Shiinaha Soosaarayaasha waraaqaha iyo alaabada | P&Q
P&Q ma lahan bir bir ah ama warshad CNC ah, laakiin sidoo kale waxay ku siin kartaa qaybo bir ah sida ay macaamiisha u baahan yihiin. Cabbir yar illaa weyn, ayaa si ballaaran loogu isticmaalay nalalka iyo qalabka guryaha, iwm.
Bixinta KharashkaXal wax ku ool ah
Shirkad bixisa wax soo saar qandaraasle ah ayaa kaa saareysa dhibaatada ka heysata aqoonsiga iyo hubinta alaab-qeybiyeyaasha - gaar ahaan alaab-qeybiyeyaasha badda.
Shirkadaha wax soo saarka qandaraaska ee leh khibrad dibadeed ayaa si dhakhso leh u aqoonsan kara alaab-qeybiyaha sida ugu fiican u dabooli kara baahiyahaaga. Waxay yaqaanaan shirkadaha leh awoodda ay u leeyihiin soo saarida qaybahaaga, booqdeen oo ay baareen xarumaha wax soo saarka, waxayna yaqaaniin kuwa wax soo saarayaashu leeyihiin rikoodhka ugu fiican ee tayada iyo soosaarida waqtiga iyo waqtiga.
Awoodda P & Q waxay ka timaaddaa si hagar la'aan ah u kala duwidda warshadaha loo adeego, saldhigga macaamiisha, raadka juquraafi ahaan, istaraatiijiyada soo-saarka, iyo badeecadda la gaaro. P&Q wey yareyn kartaa qiimahaaga, waxeyna yareyn kartaa shuruudahaaga wax soo saar, iyo jarista waqtiyada leedhka.
Nidaamka maareynta alaab-qeybiyaha P&Q wuxuu adeegsadaa wakiilada miraha iyo injineero tayo leh. Waxaan kaheleynaa alaab-qeybiyeyaasha waxsoosaarka ku saleysan tayada, waqtiga gaarsiinta, iyo qiimaha. Shuruudaheena alaab-qeybiyeyaasha waxaa ka mid ah shahaadada ISO, tas-hiilaad wax soo saar oo horumarsan, karti la xaqiijiyey oo ku saabsan awoodda loo ballanqaaday, ilaha injineernimada, QA, iyo wax soo saarka waqtiga ku habboon. Dhammaan alaab-qeybiyeyaasha P&Q waa inay soo maraan xisaab-celinteena adag ee awoodda wax soo saarka iyo hubinta tayada. Waxaa sidoo kale looga baahan yahay inay muujiyaan tayada iyo awooda gudbinta si ay ula kulmaan shuruudaha adag ee macaamiisheenna.
Faa'iidooyinka Mashiinka CNC
Qiimaha hoose ee shaqada iyo qalabka
Qeyb joogto ah
Saxsanaanta oo kordhay
Nooc dhakhso leh
Qaabab isku dhafan oo si fudud loo gaadhay
Xawaaraha wax soo saarka
Qalabka la isticmaalay loogu talagalay Mashiinka CNC
Hore: Cirbadda caagga ah
Xiga: Isku-dubaridaha alaabooyinka la dhammeeyay iyo alaabooyinka dhammaaday
Qaab dhimatay Die
Cadaadis Sare Dhimashada Dhimashada
Nalalka Nalalka Nalalka
Qaybo wax taaj oo kale duritaanka caaga
Cadaadis Die Ridaya
Birta Xaashida Birta
Golaha alaabooyinka dhammaaday iyo nus-dhammaaday ...